Izinto ozozibona eMilan | Izindaba Zokuhamba
USusana Garcia | | General, Italia, Milan
IMilan yidolobha elihle kakhulu, kepha kwesinye isikhathi ayikwazi ukuqhudelana neRoma, iVenice noma iFlorence, ngakho ingemuva uma kuziwa ekubukeni indawo. Noma kunjalo, inayo izinto eziningi ongazibona, okunye okumangalisayo, okufanele kubhekwe njengendawo yokuvakasha.
IMilan yidolobha lesibili ngobukhulu ngemuva kweRoma, ne-nucleus yesimanje kakhulu yezimboni, enesibhakabhaka esigcwele amabhilidi, njengesakhiwo esidumile sasePirelli. Kodwa-ke, futhi inemigwaqo emihle endaweni yayo yakudala futhi kunjalo, enesonto lombhishobhi elidumile.
1 UDuomo waseMilan
2 ISforzesco Castle
3 Isidlo Sokugcina sikaLeonardo da Vinci
4 UGalleria Vittorio Emanuele II
5 Izindawo eziluhlaza eMilan
Le yindlela eyaziwa ngayo isonto lombhishobhi, a i-cathedral yesitayela se-gothic esimakiwe enezingqimba eziphakeme nezithombe ezinikeza ukubukeka kwesitayela. Iphuzu layo eliphakeme kunawo wonke umfanekiso wesithombe sethusi obizwa ngeMadonnina. Ingaphambili laso selivele liyamangalisa, nalesi sitini sifakwe ngemabula nangobukhazikhazi baso. Kepha ukuhamba ngaphakathi kuveza okuningi ngaleli sonto. Gcina engqondweni lapho ungena, ukuthi ukuze uvakashele lapho kufanele uboshwe khona amadolo akho nento emahlombe akho.
Ngaphakathi kwethempeli elikhulu ungabona isakhiwo esinesitayela esilinganayo neside kakhulu, njengoba singelinye lamabhishobhi amakhulu kunawo wonke emhlabeni. Amakholomu amade anezithombe ezibaziweyo afinyelela ophahleni. Kukhona nemidwebo phakathi kwabo eveza izigcawu ezahlukahlukene zenkolo. Ngokuqinisekile kuzosithatha isikhashana zibabaza yonke imininingwane yobuciko weDuomo. Kumele kuqashelwe futhi ukuthi ngemuva kwe-altare, egumbini elingaphansi, kugcinwa enye yengcebo yalo enkulu, isipikili esivela eSiphambanweni sikaKristu, esisuswa kuphela ngoMgqibelo osondele kakhulu kuSepthemba 14.
Okunye ukuvakasha okungafanele neze ukuphuthele esontweni lombhishobhi yilokho kwe- ithala le-panoramic ngaphandle. Ungaya phezulu noma ngekheshi ngokushaja okungeziwe. Uma ungaphezulu ungabona iziqongo zesonto elikhulu eduze, futhi ube nemibono emihle yedolobha. Futhi uma unentshisekelo kwezemivubukulo, engxenyeni engezansi yesonto lombhishobhi kukhona okumbiwa ukuze kugcinwe izinsalela zethempeli elidala kanye nendawo yokubhabhadisa yamaKristu yakudala.
Le nqaba yakhiwa njengenqaba ngekhulu le-XNUMX, futhi yalungiswa njengesigodlo sasebukhosini ngumndeni wakwaSforza. Kamuva yasetshenziselwa izinhloso zempi futhi lapho bekucatshangelwe ngokudilizwa kwayo, umakhi wezakhiwo wayibuyisela. Okwamanje izindlu zeminyuziyamu ezimbalwa, ngakho-ke ungavakashela ngaphakathi futhi ngasikhathi sinye ujabulele amaqoqo athile obuciko. Ngaphakathi kukhona iMnyuziyamu Yezobuciko Bakudala, lapho ungabona khona umsebenzi wokugcina kaMichelangelo, iPietà Rondanini, umsebenzi ongakaqedwa. Kukhona negalari yezithombe, umnyuziyamu waseGibhithe noma owandulela umlando.
Isidlo Sokugcina sikaLeonardo da Vinci
Lo ngomunye wemisebenzi yokudweba edume kakhulu emhlabeni, futhi yebo, itholakala eMilan. Kusodongeni lwegumbi lokudlela lesigodlo esidala se USanta Maria delle Grazie, okwakuyindawo yayo yokuqala. Kungumsebenzi omuhle, ongaphezu kwamamitha ayisishiyagalombili ububanzi, owenziwe ngekhulu le-XNUMX. Vele, ukuze ukwazi ukukubona kufanele ubhuke kusenesikhathi, ngakho-ke kungenye yezinto okufanele uzihlele ohambweni, ukuze sikwazi ukungena ngalolo suku. Amaqembu mancane futhi anikeza cishe imizuzu eyishumi nanhlanu futhi azikho izithombe ezingathathwa.
UGalleria Vittorio Emanuele II
Le galari enkulu yadalwa ngekhulu le-XNUMX, futhi yaziwa nangokuthi iMilan Hall. Kuyindawo yezentengiselwano, lapho i- izitolo ezikhethekile kakhulu kanye nezindawo zokudlela nezindawo zokudlela ezinhle. Izindwangu ezinkulu ezicwebezelisiwe ziyamangaza, ezinikeza imidwebo ukubukeka kwesimanjemanje kakhulu. Ngaphezu kwalokho, lapha ungathola amafemu afana nePrada noma iGucci, phakathi kwamanye amafemu okunethezeka. Emaphaketheni athobekile, kuyindawo yokuhambahamba nokuphuza ezindaweni eziningi.
Izindawo eziluhlaza eMilan
Lapho sikhathele ukubona amasonto, ama-abbeys nezindawo zokuhweba edolobheni laseMilan, singaya kwenye yezindawo zalo eziluhlaza. Enye yezinto ezaziwa kakhulu yi- Ipaki iSempione, nayo eseduze kweSforzesco Castle, ngakho-ke singakubona kokubili ntambama eyodwa. Kuyipaki lapho ngaphezu kwezikhala eziluhlaza ungabona ezinye izakhiwo. I-Arco della Pace eyaqala ukwakhiwa ukukhumbula ukunqoba kukaNapoleon, noma i-Arena Civica, indawo yekhonsathi. Yindawo ongachitha kuyo izikhathi ezimbalwa zokuphumula.
Ngakolunye uhlangothi, kukhona ne- Izingadi Zomphakathi, lapho ungabona khona ikhulu le-XNUMX leminyaka uPalazzo Dugnani noma i-Natural History Museum. Enye yezindawo eziluhlaza zedolobha zokuphumula kusuka edolobheni, nazo ezingavamile eMilan.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba Zokuhamba » Ukuphunyuka eYurophu » Italia » Izinto ongazibona eMilan
IMinneriya, i-safari ehamba phambili eSri Lanka